Australia | GO & GO Travels
ခရီးစဉ်ထွက်ခွါမည့်ရက် ---- ၂၂ ရက် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈
၂၀ ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ နှင့် ၂၁ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈။
Day1) : ဆစ်ဒနီသို့ ရောက်သည့်နေ့( နံနက်/နေ့ လည် / ညနေစာ ) သြစတြေးလျှနိုင်ငံ၏ဒေသစံတော်ချိန် ( ၁၂း၀၀ )တွင် ဆစ်ဒနီမြို့ သို့ ရောက်ရှိပါမည်။ လေဆိပ်တွင်မိမိတို့ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး ဆစ်ဒနီမြို့ ကို စတင်လည်ပတ်ရာတွင် ဆစ်ဒနီတာဝါ၊ Hyde Park၊ စိန့် မေရီဘုရားကျောင်း၊ NSW Art Galley၊ တော်ဝင်ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်၊ Mrs. Macquarie’s Chair၊ ဆစ်ဒနီ အော်ပရာဟောက်စ်၊ Barbour Bridge & The Rocks တို့ ကိုလည်ပတ်ကြပြီးနောက် ဆစ်ဒနီတာဝါအိုင်း ကို ၀င်ရောက်လည်ပတ်လေ့လာကြပါမည်။ ညနေစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် တည်းခိုမည့်ဟိုတယ်သို့ လိုက်လံပို့ ဆောင်ကာ ဟိုတယ်ဝင်ခွင့်ပြုလုပ်ပြီး အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day2) : ဆစ်ဒနီ - ဘလူးမောင်းတိန်း - ဆစ်ဒနီ ( နံနက် / နေ့ လည် / ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ World Heritage List ထဲတွင်ပါဝင်သော နာမည်ကျော် ဘလူးမောင်းတိန်း သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ရန်ထွက်ခွါကြပါမည်။ ဘလူးမောင်းတိန်းသို့ မရောက်ခင် Feather Dale Wildlife Park သို့ ဝင်ရောက်ကာ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပြီးနောက်၊ ဆက်လက်ထွက်ခွါပါမည်။ Blue Maintain သို့ ရောက်လျှင် Echo Point Outlook မှနေပြီး jamisom တောာင်ကြားတွင်ရှိသော ညီအမ၃ဖေါ်ဟုခေါ်ဆိုကြသော ကျောက်တုံးကြီးကိုကြည့်ရှုကြပြီးနောက်၊ Scenic World ကိုလည်ပတ်ပါမည်။ ပြီးနောက် လေထဲတွင် ၂၇၀ မီတာ ရှိသော ကြမ်းခင်းဖန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Skyway မှ Glide နှင့် Clifftop ကြားရှိကို ကြည့်ရှုခံစားကြပြီး နောက် ရှေးဟောင်းဂျာမေဆန်တောင်ကြားအတွင်း ရထားလေးဖြင့် Journey on the world ကို တဆင့်ပြီးတ ဆင့်တက်ရောက်လေ့လာကြပါမည်။ ပြီးနောက် ၂.၄ ကီလိုမီတာ Jurassic Rainforest ကို လမ်းရှောက်လည်ပတ် လေ့လာကြပြီး၊ ဘလူးမောင်းတိန်းထိပ်ပိုင်းမှ ကေဘယ်ကားစီးပြီး Quaint Mountain Village of Leura ကို ဆက်လက်လည်ပတ်ပါမည်။ ညနေစာကို သုံးဆောင်ပြီး ဆစ်ဒနီမြို့ သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ ဆစ်ဒနီတွင် ညအိပ်ပါမည်။
Day3) : ဆစ်ဒနီ - မယ်လ်ဘုန်း by flight ( နံနက် / နေ့ လည် / ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ နာမည်ကြီးတိုးခရီးစဉ်အဖြစ်ထင်ရှားသော ဆစ်ဒနီမြို့ ရှိ အထင်ကရနေရာများဖြစ်သည့် Sydney Opera House & Harbour Bridge, Darling Harbour, Chinese Garden/ Sydney Tower & Monoril, Queen Victoria Building, Cadman’s Cottage။ EL Alamein Fountain, Sydney Aquarium, The Garrison Church တို့ ကို သင်္ဘောဖြင့်လည် ပတ်ကြည့်ရှု သည့် ခရီးစဉ်
( Sydney By Cruise ) ကို လည်ပတ်ရန်စတင်ရန်ထွက်ခွါပါမည်။ နေ့ လည်စာကို သင်္ဘောပေါ်တွင် Sightseeing ကြည့်ရှုနေစဉ် ဘူဖေးသုံး ဆောင်ကြပါမည်။ သင်္ဘောခရီးစဉ်ပြီးဆုံးလျှင် လေဆိပ်သို့ ထွက်ခွါကာ ပြည်တွင်း လေယာဉ် ဖြင့် မယ်လ်ဘုန်းမြို့ သို့ ပျံသန်းထွက်ခွါပါမည်။ မယ်လ်ဘုန်းသို့ ရောက်လျှင် ညနေစာသုံးဆောင်ပြီး၊ တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ လိုက်လံပို့ ဆောင်ကာ ဟိုတယ်ဝင်ခွင့်ပြုလုပ်ပြီး အိပ်စက်အနားယ
Day4) : မယ်လ်ဘုန်းမြို့ လည်ပတ်ခြင်း ( နံနက် / နေ့ လည် / ညနေစာ )
နံနက်စာကိုဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်မြင့်ပြီး တည်ငြိမ်လှပ အေးချမ်း သော၊ ကမ္ဘာ ပေါ်တွင်နေရန်အကောင်းဆုံးမြီု့ များထဲတွင် တစ်မြို့ အပါအ၀င်ဖြစ်သည့် မယ်လ်ဘုန်းမြို့ ကို City Tour အနေဖြင့် စတင်လည်ပတ်ကြရာတွင် Queen Victoria Market. China Town, Botanical Garden, Albert Park Lake, St. Patrick’s Cathedral နှင့် မြစ်ပေါ်ရှိ Trendy Southbank တို့ ကို လည်ပတ်လေ့လာကြပြီးနောက် ညနေစာသုံး ဆောင်ပြီး ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day5) : မယ်လ်ဘုန်းမြို့ လည်ပတ်ခြင်း - နှင့် လေဆိပ်သို့ ပို့ ဆောင်နှုတ်ဆက်ခြင်း( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
နံနက်စာကိုဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ Victoria ရှိ Sovereign တောင်ကုန်း တွင်ပြုလုပ် ထားသော ၁၈၅၁ ခုနှစ်ပုံစံ Air Museum (Sovereign Hill is an open-air museum in Golden Point,asuburb of Ballarat, Victoria, Australia. Sovereign Hill depicts Ballarat's first ten years after the discovery of gold there in 1851. It was officially opened on 29 November 1970 ) ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ကြပြီးနောက်၊ ညနေစာသုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက် လေဆိပ်သို့ ပို့ ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။
လူဦးရေ တစ်ဦးလျှင် USD ဖြင့် ကျသင့်သောဈေးနှုန်းများ
The price valid from Now – March 2019 ( Except Special even holiday period )
Hotel Category 6-9 pax 10 pax 15 pax 16-25 pax 26-30 pax Single +
3* 1380 1380 1180 1290 1180 580
4* 1520 1520 1410 1290 1168 680
• Under 12 years, share bed ( 60% adult’s fare )
• Under 12 years, with bed ( 80% adult’s fare )
• 3* or 4* hotel accommodation with breakfast
• Lunch Cruise ticket
• One bottle mineral water per day
• Domestic air ticket fare ( Sydney to Melbourne )
• Meals as specific itinerary
• Myanmar tour leader ( Start 10 pax )
• Australia visa fee & visa service
• International Air ticket & air port tax
• Mini bar & nature of other personal uses
မြန်မာပြည်မှစတင်ထွက်ခွါမည့်နေ့း ရန်ကုန် - ဘန်ကောက် - ဘရစ်စဘိန်း ( လေယာဉ်ပေါ်တွင်အစားအသောက်ပါမည် )
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ညနေ( ၁၉း၄၀ ) အချိန်တွင် စတင် ထွက်ခွါပါမည်။ ထိုင်းစံတော်ချိန် ( ၂၁း၃၀ ) တွင် ဘန်ကောက်မြို့သုဝဏ္ဏဘုံမိလေဆိပ်သို့ ဆိုင်ရောက်ပါမည်။ ထိုလေဆိပ်မှ ( ၂၃း၅၉ ) အချိန်တွင် ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။
Day1) : သြစတြေးလျှနိုင်ငံ၊ ဘရစ်စဘိန်းမြို့ သို့ ရောက်ရှိသည့်နေ့( နေ့ လည် / ညနေစာ )
သြစတြေးလျှနိုင်ငံ၏ဒေသစံတော်ချိန် ( ၁၂း၃၀ )တွင် ဘရစ်စဘိန်းမြို့ သို့ ရောက်ရှိပါမည်။ လေဆိပ်တွင်မိမိတို့ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး တဆက်တည်း နေ့ လည်စာကို ဆူရှီစတေရှင်တွင်ဘူဖေး ( Sushi Station Buffet ) သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ပြီးနောက် ကွင်းစလန်းပြည်နယ်၏မြို့ တော်ဘရစ်စဘိန်းမြို့ ကို စီတီးတိုး အနေဖြင့်စတင်လည်ပတ်ရာတွင် Story Bridge, City Hall, Parliament House, St. John’s Cathedral နှင့် Treasury Casino တို့ ကို ပထမဦးစွာလည်ပတ်လေ့လာကြပြီးနောက် Queen Street Mall, China town, South bank Parklands နှင့် kangaroo Point တို့ ကို လည်ပတ်ဈေးဝယ်ကြပြီး၊ ညနေစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ လိုက်လံပို့ ဆောင်ကာ ဟိုတယ်ဝင်ခွင့်ပြုလုပ်ပြီး အိပ်စက်အနားယူပါမည်။ ဘရစ်စဘိန်းတွင်ညအိပ်ပါမည်။
Day2) : ဘရစ်စဘိန်း - ဂိုးလ်ကို့ စ် ( နံနက် / နေ့ လည် / ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှ Check out လုပ်ကာ ဘရစ်စဘိန်းမှ ၄၅ မိနစ်ခန့် ကားမောင်းသွားရသော ကွင်းစလန်းပြည်နယ်မှာ သာမက သြစတြေးလျှနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး သိမ်းပါတ်ခ် နှင့် Harbour Town ရှိ အကြီးဆုံး Outlet shopping Center ကို သွားရောက်လည်ပတ်ဈေးဝယ်ရန်ထွက်ခွါပါမည်။ ထို Theme park ရှိ Movie World ( သို့) Sea World ကို လည်ပတ်ကြပါမည်။ ဂိုးလ်ကို့ စ်တွင် ညအိပ်ပါမည်။
Day3) : ဂိုးလ်ကို့ စ် - ဆစ်ဒနီ by Domestic flight ( နံနက် / နေ့ လည် / ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှ တခါတည်း Check Out လုပ်ကာ သြစတြေးလျှနိုင်ငံတွင်ထင်ရှားသော Koala လေးများနှင့်အတူဓါတ်ပုံရိုက်ကြရန်အတွက် Currumbin Wildlife Sanctuary သို့ ထွက်ခွါပါမည်။ နေ့ လည်စာ Aussie ဘာဘီကျူ့ကိုသုံးဆောင်ကြပြီးနောက် ဆစ်ဒနီမြို့ သို့ ထွက်ခွါ ရန်အတွက် ဘရစ်စဘိန်းလေဆိပ်သို့ပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ဆစ်ဒနီမြို့ လေဆိပ်သို့ သို့ ရောက်လျှင် ညနေစာကို သုံးဆောင်ရန်စားသောက်ဆိုင်သို့ထွက်ခွါပါမည်။ ညနေစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ လိုက်လံပို့ဆောင်ကာ ဟိုတယ်ဝင်ခွင့်ပြုလုပ်ပြီး အိပ်စက်အနားယူပါမည်။ ဆစ်ဒနီမြို့ တွင်ညအိပ်ပါမည်။
Day4) : ဆစ်ဒနီမြို့- ဘလူးမောင်းတိန်း - ဆစ်ဒနီမြို့လည်ပတ်ခြင်း ( နံနက် / နေ့ လည် / ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ World Heritage List ထဲတွင်ပါဝင်သော နာမည်ကျော် ဘလူးမောင်းတိန်း သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ရန်ထွက်ခွါကြပါမည်။ ဘလူးမောင်းတိန်းသို့ မရောက်ခင် Feather Dale Wildlife Park သို့ ဝင်ရောက်ကာ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပြီးနောက်၊ ဆက်လက်ထွက်ခွါပါမည်။ Blue Maintain သို့ ရောက်လျှင် Echo Point Outlook မှနေပြီး jamisom တောာင်ကြားတွင်ရှိသော ညီအမ၃ဖေါ်ဟုခေါ်ဆိုကြသော ကျောက်တုံးကြီးကိုကြည့်ရှုကြပြီးနောက်၊ Scenic World ကိုလည်ပတ်ပါမည်။ ပြီးနောက် လေထဲတွင် ၂၇၀ မီတာ ရှိသော ကြမ်းခင်းဖန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Skyway မှ Glide နှင့် Clifftop ကြားရှိကို ကြည့်ရှုခံစားကြပြီး နောက် ရှေးဟောင်းဂျာမေဆန်တောင်ကြားအတွင်း ရထားလေးဖြင့် Journey on the world ကို တဆင့်ပြီးတ ဆင့်တက်ရောက်လေ့လာကြပါမည်။ ပြီးနောက် ၂.၄ ကီလိုမီတာ Jurassic Rainforest ကို လမ်းရှောက်လည်ပတ် လေ့လာကြပြီး၊ ဘလူးမောင်းတိန်းထိပ်ပိုင်းမှ ကေဘယ်ကားစီးပြီး Quaint Mountain Village of Leura ကို ဆက်လက်လည်ပတ်ပါမည်။ ညနေစာကို သုံးဆောင်ပြီး ဆစ်ဒနီမြို့ သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ ဆစ်ဒနီတွင် ညအိပ်ပါမည်။
Day5) : ဆစ်ဒနီ - မဲလ်ဘုန်းမြို့by Domestic flight ( နံနက် / နေ့ လ်ည / ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှ တခါတည်း Check Out လုပ်ကာ နာမည်ကြီးတိုးခရီးစဉ်အဖြစ်ထင်ရှားသော ဆစ်ဒနီမြို့ ရှိ အထင်ကရနေရာများဖြစ်သည့် Sydney Opera House & Harbour Bridge, Darling Harbour, Chinese Garden/ Sydney Tower & Monoril, Queen Victoria Building, Cadman’s Cottage။ EL Alamein Fountain, Sydney Aquarium, The Garrison Church တို့ ကို သင်္ဘောဖြင့်လည် ပတ်ကြည့်ရှု သည့် ခရီးစဉ် ( Sydney By Cruise ) ကို လည်ပတ်ရန်စတင်ရန်ထွက်ခွါပါမည်။ နေ့လည်စာကို သင်္ဘောပေါ်တွင် Sightseeing ကြည့်ရှုနေစဉ် ဘူဖေးသုံး ဆောင်ကြပါမည်။ သင်္ဘောခရီးစဉ်ပြီးဆုံးလျှင် လေဆိပ်သို့ ထွက်ခွါကာ ပြည်တွင်းလေယာဉ်ဖြင့် မယ်လ်ဘုန်းမြို့ သို့ ပျံသန်းထွက်ခွါပါမည်။ မယ်လ်ဘုန်းသို့ ရောက် လျှင်ညနေစာသုံးဆောင်ပြီး၊ တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ လိုက်လံပို့ ဆောင်ကာ ဟိုတယ်ဝင်ခွင့်ပြုလုပ်ပြီး အိပ်စက်အနား ယူပါမည်။
Day6) : မဲလ်ဘုန်းမြို့ လည်ပတ်ခြင်း (နံနက် / နေ့ လ်ည / ညနေစာ )
Day7) : မဲလ်ဘုန်း - ဘယ်လ်လာရတ်တောင်ကုန်း - လေဆိပ် (နံနက် / နေ့ လ်ည / ညနေစာ )
နံနက်စာကိုဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ Victoria ရှိ Ballarate Sovereign တောင်ကုန်း တွင်ပြုလုပ် ထားသော ၁၈၅၁ ခုနှစ်ပုံစံ Air Museum (Sovereign Hill is an open-air museum in Golden Point,asuburb of Ballarat, Victoria, Australia. Sovereign Hill depicts Ballarat's first ten years after the discovery of gold there in 1851. It was officially opened on 29 November 1970 ) ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ကြပြီးနောက်၊ ညနေစာသုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက် လေဆိပ်သို့ ပို့ ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။
3* 2390 2220 2120 1969 1735 750
4* 2650 2450 2360 2170 1968 950
• Two way domestic air ticket fares for Brisbane - Sydney - Melbourne